काठमाडौ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा हरेक दिन नयाँ र फरक घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । यो बिचमा उत्तर प्रदेशस्थित कानपूर जिल्लामा अधबैंसे दुलाहा (बेहुला) लाई देखेपछि दुलही (बेहुली) ले विवाह गर्न अस्विकार गरेको खबर आएको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार दुलहीले दुलहातर्फ माला फ्याँक्दै चिच्याउँदै भनिन्, ‘ममाथि धोका भएको छ ।’ समाचार अनुसार दुलहीको यस्तो व्यवहार देखेपछि त्यहाँ उपस्थित पाहुना, जन्ती अचम्मित भए । त्यतिबेला आमाले छोरीलाई ठूलो दबाब दिइन् तर उनले मानिनन् । रिपोर्टका अनुसार निकै सम्झाएपछि पनि जब छोरी मानिनन् तब दुलहीकी आमा नै दुलहासँग आगरा गइन् ।
१७ वर्षीया दुलहीले यसै वर्ष १२ कक्षाको परीक्षा दिएकी छिन् । ती युवतीकी आमाले आगरामा बस्ने आफ्नी काकीकी नन्दका छोरासँग उनको सम्बन्ध तय गरेकी थिइन् । मार्च १० तारिखको बेलुकी आगराबाट दुलाहा जन्ती लिएर दुलहीको घर पुगे । जब दुहली वरमाला लिएर स्टेजमा पुगिन् तब दुलहालाई देखेर भड्किइन् । ती युवती आफूमाथि धोका भएको भन्दै चिच्याउन थालिन् । परिवारले के कारणले विवाह गर्न नखोजेको भनेर सोध्दा उनले ‘जस्तोसुकै स्थिती भएपनि म यो बुढासँग केटासँग विवाह गर्दिनँ’ भन्दै रुन थालिन् ।
दुलहीले विवाह अघि जुन केटाको तस्वीर देखाइएको थियो त्यो उनी नभएको बताइन् । छोरीले दुलाहा अस्विकार गरेपछि भोलिपल्ट बिहान, जे भयो त्यो थप चकित पारिदिने किसिमको भयो । जब छोरीलाई विवाहका लागि मनाउन सकिनन् तब आमा नै सबैलाई छोडेर आफैं दुलहासँग आगरा गइन् । बेहुलीका अनुसार तीन वर्षअघि उनको पिताको मृत्यु भएको थियो । उनका एक बहिनी र एक भाइ छन् । अहिले छोरी बिहे गर्न दुलाहा बनेर गएको केटासँग आमाले नै बिबाह गरेर घरजम गरिरहेकी छिन् । एजेन्सी
फर्सीमा के-के पोषक तत्व पाइन्छ ?
अमेरिकामा मानव शरीरबाट मल बनाउन अनुमति !
काम गर्न छोडेको मुटुलाई जगाउने तरिकाहरु
हल्ट प्राइज २०२१–२२ को विजेता बन्यो टिम शिशी
बिजुक्छेँद्वारा गय् भिंद्यो हनुमन्त्ते पुल उद्घाटन
छाला रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर
बहाःबही सम्बन्धी ललितपुरमा फागुण २१ र २२ गते बृहत गोष्ठी
सबै खालका योजना तर्जुमा गर्न अनुसन्धानमा आधारित आधार तयार भएको छ : मेयर शाक्य
भक्तपुर कप फुटबलको उपाधि भक्तपुर एफसीलाई
बुद्धको ज्ञान र सन्देशमार्फत बुद्ध जन्मिएको देश भनी नेपाललाई विश्वभर चिनाउनुपर्छ : मेयर शाक्य
कर्मचारीका लागि ‘स्थानीय सरकार र कानून’ सम्बन्धी तालिम
एमसीसीको पक्षमा उभिएपछि मन्त्री झाँक्रीको राजीनामा मागियो
रुसी बम हमलामा ७ जना युक्रेनीको मृत्यु, १९ जना बेपत्ता